Roborock reinvents ụlọ ọrụ na CES 2022 | Ozi gadget
Roborock, ụlọ ọrụ ahụ pụrụ iche na mmepe na mmepụta nke ma robotic na ikuku ikuku na-ehicha ụlọ, gosipụtara taa na ihe ngosi elektrọnik ndị ahịa 2022. (CES) flagship ọhụrụ ya, Roborock S7 MaxV Ultra. Site na ọdụ ụgbọ mmiri chaja smart ọhụrụ, S7 MaxV Ultra na-arụ ọrụ na teknụzụ kachasị elu nke Roborock ruo taa iji weta nhicha dị elu yana ọbụna nwee ntụsara ahụ.
Otu ọdụ ụgbọ mmiri na-ebu chaja nke na-eme ya niile: Ndakọrịta na Roborock Empty ọhụrụ, Flush na Fill Base, na-ebelata mmezi ntuziaka maka ndị ọrụ. Mop ahụ na-ehichapụ na-akpaghị aka n'oge na mgbe ihichachara, na-ahụ na S7 MaxV Ultra dị njikere maka ọsọ gị ọzọ. Ebe nchaji na-ehichakwa onwe ya mgbe ị na-asa akwa, na-edebe ọdụ ahụ n'ọnọdụ dị mma. Na mgbakwunye, ọrụ na-ejuputa mmiri na-akpaghị aka na-enye ohere S7 MaxV Ultra imeghe ma kpochaa ruo 300m2, 50% karịa ndị bu ya ụzọ, ebe akpa uzuzu na-ejide unyi ruo izu 7.
Sistemụ zere ihe mgbochi ReactiveAI 2.0 ọhụrụ: Ejiri igwefoto RGB kwadoro ya, ọkụ 3D ahaziri ahazi, yana ngalaba nhazi akwara ọhụrụ, S7 MaxV Ultra na-amata ihe ndị dị n'ụzọ ya nke ọma na ngwa ngwa na-emegharị iji sachaa ha gburugburu, n'agbanyeghị ọnọdụ ọkụ. Na mgbakwunye, ọ na-achọpụta ma chọta arịa ụlọ n'ime ngwa ahụ, na-enye gị ohere ịmalite ịdị ọcha ngwa ngwa gburugburu tebụl iri nri ma ọ bụ sofas site na ịpị akara ngosi na ngwa ahụ. Ọ na-egosipụtakwa ọnụ ụlọ na ihe ndị dị n'ala, ma na-atụ aro usoro nhicha dị mma dị ka usoro, ike imi, na ike ncha. S7 MaxV Ultra bụ nke TUV Rheinland kwadoro maka ụkpụrụ cybersecurity ya.
Site na teknụzụ VibraRise a ma ama: Ezubere maka oge nhicha na-adịghị akwụsị akwụsị, S7 MaxV Ultra na-egosipụta teknụzụ VibraRise® nke Roborock a na-akwanyere ùgwù - ngwakọta nke ịchacha sonic na mop na-ebuli onwe ya. Nhicha Sonic na-ehichapụ ala na ike dị elu iji wepụ unyi; mgbe mop na-enwe ike ime mgbanwe dị mma na ebe dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, ọ na-ebuli onwe ya na-akpaghị aka na ọnụnọ nke kapeeti.
Ejikọtara ya na ike mmịpụta kacha nke 5100pa, S7 MaxV Ultra na-enye ihicha nke ọma. S7 MaxV Ultra (S7 MaxV robot vacuum Cleaner pack and Emptying, Washing and Filling Base), ga-adị na Spain maka ọnụahịa nke 1399 euro, na nkeji nke abụọ nke 2022. S7 MaxV robot vacuum Cleaner nwekwara ike zụta iche iche. maka € 799.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Roborock weghachi ụlọ ọrụ ahụ na CES 2022